” Go’anka Gacanteyda kuma Jiro ” Ronald Koeman oo qirtay in Ceyrintiisa ay Dhowdahay | Dalkaan.com
Home ciyaaraha ” Go’anka Gacanteyda kuma Jiro ” Ronald Koeman oo qirtay in Ceyrintiisa...
” Go’anka Gacanteyda kuma Jiro ” Ronald Koeman oo qirtay in Ceyrintiisa ay Dhowdahay
Tababaraha Barcelona Ronald Koeman ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa ka dib guuldarradii ceebta aheyd ee kooxdiisa 3-0 ka soo gaartay Benfica kulankii Champions League ee xalay. Tababaraha reer Holland ayaa og in shaqadiisu halis ku jirto.
“Kaliya waxaan ku siin karaa fikradayda ku aaddan shaqadayda kooxda – waxaan dareemayaa inay i taageerayaan ciyaartoydayda iyo habdhaqankooda,” ayuu Koeman yiri ciyaarta kaddib.
Tababaraha Barcelona ayaa sidoo kale dib u milicsaday qaab ciyaareedkii kooxdiisa ee guuldarradii 3-0 ee ka soo gaartay Benfica, taasoo burburisay dhowr fursadood oo Blaugrana ay ku guuldarreysatay inay beddesho.
Ronald Koeman ayaa u muuqda inuu ku nool yahay waqtiyada ugu adkaa Barcelona. Mustaqbalka tababarahan ayaa si weyn loo hadal hayey dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay, iyadoo wararku sheegayaan in uu wajihi doono shaqo ka ceyrin waqti kasta.
Ninka reer Holland ayaa ku guuldareystay inuu kooxda u jiheeyo jihada saxda ah. Kooxda reer Catalan ayaa laga badiyay labo ka mid ah kulamadii Champions League ee xilli ciyaareedkan, waxaana ay haatan fadhiyaan halka ugu hooseysa Group E.
Qaab ciyaareedkooda La Liga ma ahan mid cajiib ah madaama ay maareeyeen kaliya seddex guul lix kulan oo ay ciyaareen xilli ciyaareedkan waxayna ku kaalinta lixaad.
Previous articleMuxuu R/W ROOBLE ka yiri doorashadii maanta lagu soo gaba-gabeeyey Afisyoone?
Next articleIska hor-imaad ka dhex qarxay Ahlu-Sunna iyo Galmudug iyo xaaladda oo kacsan